UJami "Maloya" ufika ngokuthuthukiswa kwesixhumi esibonakalayo, ukuhlanganiswa kwamakhasimende kweWindows neLinux nokuningi | Kusuka kuLinux
UJami «Maloya» ufika ngokuthuthuka kwesixhumi esibonakalayo, ukuhlanganiswa kwamakhasimende kweWindows neLinux nokuningi
Okuhle | 03/06/2021 23:55 | Kubuyekezwe ku- 14/06/2021 23:10 | Aplicaciones
Muva nje uhlobo lwe ipulatifomu yezokuxhumana esezingeni eliphansi UJami «Maloya», lapho ubusha obuyinhloko yi ukuhlanganiswa kwamakhasimende kwe-Linux ne-Windows, ngaphezu kwalokho okunye ukuthuthuka kwesixhumi esibonakalayo, ukuzinza nokuningi nakho kuhlanganisiwe.
Kulabo abangazi ngale phrojekthi, kufanele bakwazi lokho ihlose ukwakha uhlelo lokuxhumana olusebenza kumodi ye-P2P futhi lokho kuvumela ukuhlela ukuxhumana kokubili phakathi kwamaqembu amakhulu nokwenza izingcingo ngazinye ezinemfihlo ephezulu nokuvikeleka.
Ngokungafani namakhasimende wokuxhumana wendabuko, UJami angadlulisa imiyalezo ngaphandle kokuxhumana namaseva angaphandle ngokuhlela ukuxhumana okuqondile phakathi kwabasebenzisi besebenzisa ukubethela kokuphela kokuphela (okhiye bokuphela abakhona kuphela ohlangothini lweklayenti) nokufakazela ubuqiniso ngokuya ngezitifiketi ze-X .509.
Ngaphezu kokuthumela imiyalezo ephephile, lolu hlelo lukuvumela ukuthi ushaye izingcingo zezwi nezamavidiyo, wakhe izingcingo zenkomfa, ushintshe amafayela, uhlele ukushintshaniswa kwamafayela nokuqukethwe kwesikrini.
Izinto ezintsha ezintsha zikaJami «Maloya»
Kule nguqulo entsha kaJami «Maloya» ekugcineni isicelo seklayenti sihlanganisiwe kuzingxenyekazi zeLinux neWindows, ngenkathi kune-macOS kushiwo ukuthi kuzinguqulo zakamuva kuzohlanganiswa). Futhi yilolu shintsho isikhombimsebenzisi esisekelwe ku-Qt sathuthukiswa, Ngaphandle kwalokho Kwakhiwe kabusha ukuze kube lula ukushaya izingcingo nezingqungquthela ngazinye. Kungezwe ikhono lokushintsha imakrofoni nedivayisi yokukhipha ngaphandle kokuphazamisa ucingo. Amathuluzi okwabelana ngesikrini athuthukisiwe.
Futhi kugcizelelwa ukuzinza nokuthuthuka kwamakhono enkomfa nawokuhlangana, Njengoba ukwesekwa sekuqalisiwe ekuqokweni komengameli bezingqungquthela, abangakwazi ukunquma ukuhlelwa kwevidiyo yabahlanganyeli esikrinini, banikeze izikhulumi phansi baphazamise ababambiqhaza uma kudingeka. Ukwahlulela ngokuhlolwa okwenziwe, UJami ngemodi entofontofo ingasetshenziselwa izingqungquthela ezinabahlanganyeli abangafika kwabangu-20 (Lesi sibalo kulindeleke ukuthi sikhuphuke sifike kuma-50 kungekudala).
Ngaphezu kwalokho, singakugqamisa futhi lokho kumenyezelwe ukwakhiwa kweklayenti le-GNU / Linux nge-interface esekwe kwi-GTK. IJami-gnome izosekelwa isikhashana, kepha ekugcineni ukusebenza kuyo kuzoma ngokuthanda iklayenti elizinze ku-Qt. Lapho abathanda ukuvela bekulungele ukuphatha iklayenti le-GTK ezandleni zabo, iphrojekthi isilungele ukunikeza lelo thuba.
Iseva yokuphathwa kwe-akhawunti yeJAMS ithuthukisiwe (I-Jami Account Management Server), ekuvumela ukuthi uphathe ngaphakathi ama-akhawunti womphakathi wendawo noma inhlangano, ngenkathi ugcina isimo esisatshalaliswa senethiwekhi.
Kwezinye izinguquko okuvelele kunguqulo entsha:
I-JAMS ingasetshenziselwa ukuhlanganiswa ne-LDAP ne-Active Directory, ukugcina incwadi yamakheli, nokusebenzisa izilungiselelo ezithile zamaqembu wabasebenzisi.
Ukuxhaswa okugcwele kweprotocol ye-SIP kubuyisiwe futhi nekhono lokuxhuma kumanethiwekhi we-GSM nanoma yimuphi umhlinzeki wesevisi we-SIP unikezwe.
Iklayenti le-MacOS lifaka ukuxhaswa kwe-plug-in.
Ithuthukise i-plugin ye- "GreenScreen", esebenzisa amasu okufunda omshini ukufihla noma ukufaka okunye ngemuva kumakholi wevidiyo.
Le nguqulo entsha ingeza ikhono lokufiphaza ingemuva ukuze abanye bangaboni okwenzekayo eduze kwalowo obambe iqhaza.
Kungezwe i-plugin entsha ye- "Watermark", ekuvumela ukuthi ubonise uphawu lwakho noma yisiphi isithombe kuvidiyo, futhi ushumeke usuku nesikhathi.
Kungezwe i-plugin ye- "AudioFilter" ukufaka imiphumela ye-reverb kuzwakale.
Iklayenti le-iOS lakhiwe kabusha, lapho i-interface iguqulwe ngokuphelele futhi kwenziwe umsebenzi ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
Kuthuthukiswe ukuzinza kwamakhasimende kwe-macOS.
Uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho, ungabonisana imininingwane ekulesi sixhumanisi esilandelayo.
Ekugcineni, ama-binaries alungiselelwe okwehlukile amasistimu, afana ne-Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE, RHEL, Windows, MacOS, iOS, Android, ne-Android TV futhi kunezinketho ezahlukahlukene ezenzelwe izixhumi ezibhekene ne-Qt, GTK, ne-Electron.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » UJami «Maloya» ufika ngokuthuthuka kwesixhumi esibonakalayo, ukuhlanganiswa kwamakhasimende kweWindows neLinux nokuningi
Ku-Manjaro - ngakho-ke ku-ARCH - singathokozela neJAMI.
umphakathi / libjamiclient 20210301-1 (650.9 KiB 2.4 MiB) [jami]
Ipulatifomu yokuxhumana yamahhala neyendawo yonke evikela ubumfihlo nenkululeko yabasebenzisi (umtapo wezokuxhumana wamakhasimende)
umphakathi / jami-gnome 20210308-1 (777.3 KiB 2.9 MiB) [jami]
Ipulatifomu yokuxhumana yamahhala neyendawo yonke evikela ubumfihlo nenkululeko yabasebenzisi (iklayenti le-GNOME)
umphakathi / jami-daemon 20210308-1 (3.7 MiB 8.2 MiB) [jami]
Ipulatifomu yokuxhumana yamahhala neyendawo yonke evikela ubumfihlo nenkululeko yabasebenzisi (ingxenye yedayemon)